မြန် မာ မိ စ္ဆာ ဒိ ဋ္ဌိ များ ရပ် ဝန်း | စမ်းသပ်ဆဲကာလ
မြန် မာ မိ စ္ဆာ ဒိ ဋ္ဌိ များ ရပ် ဝန်း
Filed under: Uncategorized — mmkafir @ 3:08 pm
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ကွက်ကိုသွားသတိရမိတယ်။ မြေးအဖိုး၂ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ မြေးလုပ်သူက သူငယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသွားတယ်။ အဖိုးကခေတ်ပညာတတ်ပုံမရပါဘူး။ မြေးလေးက အဖိုးလုပ်သူရဲ့ရှေ့မှာ စာကျက်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လုံးပါသည်ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီမှာအဖိုးလုပ်သူက အမှားပြင်ပေးတယ်။ “ဟဲ့မြေးရဲ့ ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ အပြားကြီးကွဲ့”ဆိုပြီးတော့။ ကျောင်းမှာအဲဒီလိုသွားဖြေတော့ ကလေးခမျာ အမှတ်လျော့ခံရတာပေါ့။ ဒါနဲ့ နောက်နေ့လည်းရောက်ရော အိမ်မှာစာကျက်တော့ “ကမ္ဘာကြီးသည် ကျောင်းတွင်လုံး၍ အိမ်တွင်ပြားပါသည်” ဆိုပြီးဖြစ်သွားရောဗျာ။ အခုလည်း ကမ္ဘာကြီးသည် အပြင်တွင်လုံး၍ ကိုရန်ထဲတွင်ပြားပါသည် ဆိုပြီးတော့ အဲဒီကာတွန်းလေးကိုအစွဲပြုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုရမ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကိုလုံးတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုပြီး ဝါဒဖြန့်နေကြတဲ့ မွတ်ဆလင်သာသနာပြုတွေကို တွေ့နေမြင်နေရပါတယ်။ သူတို့လိမ်နေကြတာဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ မခိုင်လုံလဲဆိုတာ အစ္စလာမ်အကြောင်း ဗဟုသုတရှိသူတွေ ရိပ်မိပါလိမ့်မယ်။ အဲတော့ ရှေးခေတ်ကာလကလူတွေ ကမ္ဘာပြားကြီးကို ဘယ်လိုယုံခဲ့ကြကြောင်းကို ကြည့်ရအောင်။ ကမ္ဘာကြီးလုံးကြောင်း သက်သေမပြနိုင်သေးခင် ကာလတုန်းက လူတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးပေါ်မှာ ပေါလောမျောနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၆ရာစုဘီစီကတည်းကစပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးကြောင်း ဂရိအတွေးအခေါ်တွေ၊ ပါရှန်သီအိုရီတွေ ရှိနေခဲ့တာမှန်ပေမယ့် ၁၆ရာစုမှာ ကိုလံဘတ်စ်နဲ့ မက်ဂျယ်လန်တို့က ကမ္ဘာတစ်ပတ် အောင်အောင်မြင်မြင်ရွက်လွှင့်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ ကမ္ဘာပြားတွေကို ယုံကြည်ကြသလိုပဲ။ အလယ်ခေတ်အစ္စလာမ်ကမ္ဘာမှာလဲ
ကမ္ဘာကြီးကပြားကြောင်း ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်ပါပုံတွေကိုနမူနာကြည့်ပါ
Qutb al-Din al-Shiraz(၁၂၃၆-၁၃၁၁) ဆိုတဲ့ ပါရှန်မွတ်ဆလင် သင်္ချာနဲ့အာကာသပညာရှင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ကမ္ဘာပုံပါ
Muhammad al-Idrisi (၁၁၀၀-၁၁၆၆) က ကမ္ဘာကြီးကို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အနေနဲ့ ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်
မိုဟာမက်သေဆုံးပြီးတော့ သူ့ကိုဆက်ခံသူ ကာလီဖာများက စစ်တိုက်နယ်ချဲ့ပြီး ဓားမိုးသာသနာပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါမို့လို့ပဲ အစ္စလာမ်အင်ပါယာကြီးဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်ပါယာစာရင်းတွေထဲမှာ ပါခဲ့ပါတယ်။ နယ်မြေကျယ်ပြန့်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဂရိတွေဆီကနေ သိပ္ပံပညာကိုသင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်တွေဆီကလည်း သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ ယမ်း၊ စက္ကူစတဲ့ နည်းပညာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါရှားလိုမျိုး နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ ပါရှန်မွတ်ဆလင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေထွက်တာ ဘာမှမဆန်းပါဘူး။ ကွန်မြူနစ်တွေလာသိမ်းပိုက်လည်း ပါရှန်ကွန်မြူနစ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ထွက်လာမှာအမှန်ပါပဲ။ အဲဒါ အစ္စလာမ်နဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။ ကိုရန်ကသာ ကမ္ဘာကြီးလုံးကြောင်းပြောထားရင် ဟိုးအရင်ကတည်းက သိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပြားကို လက်ခံဖို့တောင် မလိုတော့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာတိုးတက်လာတော့ အလယ်ခေတ်မွတ်ဆလင်တွေလည်း ကမ္ဘာကြီးကလုံးကြောင်းတွေ့ရှိလာပါတယ်။ အခုလိုတွေ့ရှိချက်ကလည်း ကိုရန်ကပြောလို့တွေ့ရှိတာမဟုတ်ပါ။ လူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်၊ လူ့စွမ်းအားကြောင့်တွေ့ရှိတာပါ။ ဘုရားသခင်အတွက် တစ်နေရာမှမပါပါဘူး။ ကိုရန်ထဲမှာ ကမ္ဘာပြားကြောင်းပြောထားတဲ့ အာယတ်တစ်ချို့တွေ့ရပါတယ်။ ဟောဒါကတော့ ကိုရန်နဲ့ ဟာဒီးစ်ကျမ်းတွေမှာပါတဲ့ ကမ္ဘာပုံစံငယ်ပါ ကိုရန်ကျမ်းထဲမှာလည်း အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။
၎င်းပြင် ထိုအရှင်မြတ်သည် ယင်း(မိုးကောင်း ကင်ကို စနစ်တကျ ပြပြင်တော်မူပြီးသည့်) နောက်တွင် ပထဝီမြေကို ဖြန့်ခင်းတော်မူခဲ့၏။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၇၉:၃၀)
၎င်းပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် ပထဝီမြေကို ဖြန့်ခင်းတော်မူ၍ ယင်းပထဝီမြေ၌ လေးလံသော တောင်ကြီးများကိုချထားတော်မူလေသည်။ ထိုမှတပါး ငါအရှင်မြတ်သည် ယင်းပထဝီမြေ၌ ခန့်မှန်း (သတ်မှတ်)ပြီးဖြစ်သော အရာဝတ္ထုတိုင်းကို ပေါက်ရောက် ဖြစ်ထွန်းစေတော်မူခဲ့လေသည်။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၁၅:၁၉)
ကမ္ဘာကြီးကိုဖြန့်ခင်းပြီး တောင်ကြီးတွေကိုချထားတာပါတဲ့လား? ဘုရား ဘုရား။ ပထဝီအထူးပြုသမားတွေ သင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်ဆွဲဖို့သာ ပြင်ထားကြပေတော့ဗျို့။ စတုတ္ထတန်းပထဝီဝင်မှာပါတဲ့ တောင်ဖြစ်ပေါ်ပုံတွေလည်း မြောင်းထဲထည့်လိုက်ကြတော့ဗျို့။
ထိုမှတပါး ငါအရှင်မြတ်သည် ပထဝီမြေကို ဖြန့်ခင်းထားတော်မူ၏။ ၎င်းပြင် ယင်းပထဝီမြေ၌ တောင်များကို စိုက်ထူထားတော်မူ၏။ ထို့ပြင် ငါ အရှင်မြတ်သည် ယင်းပထဝီမြေ၌ လှပတင့်တယ် ရှုချင် စဖွယ်ကောင်းသော အရာဝတ္ထုမျိုးစုံတို့ကို ပေါက်ရောက် စေထားတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၅၀:၇)
ထိုမှတစ်ပါး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင် တို့အကျိုးငှာ ပထဝီမြေကို အခင်းအကျင်း ပြုလုပ် တော်မူခဲ့၏။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၇၁:၁၉)
ထို့ပြင် (ငါအရှင်မြတ်သည်) ပထဝီမြေကို လည်းကောင်း၊ ထိုပထဝီမြေကို ဖြန့်ခင်းတော်မူသော အရှင်ကိုလည်းကောင်း၊ သက်သေထူတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန်ကျမ်း ၉၁:၆)
အခုပြောထားတဲ့ အာယတ်တော်တွေကတော့ ကိုရန်ထဲမှာပါတဲ့ ကမ္ဘာပြားကြောင်းသက်သေတွေထဲက ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ စာကြောင်းတွေပါပဲ။ အလ္လာအရှင်မြတ်ကြီးက ကမ္ဘာကြီးကို ကော်ဇောသဖွယ် ဖြန့်ခင်းထားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကိုရန်တစ်ခုလုံးမှာ ကမ္ဘာလုံးကြောင်းစာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်မှမပါတဲ့အပြင် အထက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ အလ္လာဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ နံပြားကြီးတစ်ချပ်လိုပဲ ပြားနေကြောင်းတွေ့ရမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးကို စာရွက်တစ်ချပ်လိုခင်း တောင်တွေကို စက္ကူဝိတ်တုံးတွေလိုဖိထားတဲ့
ပုံစံမျိုး ကိုရန်ထဲမှာတစ်နေရာမက ပြောထားပါသေးတယ်။ ကိုရန်တစ်ခုလုံးမှာ ကမ္ဘာပြားကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရတာတောင်မှ ဆင်သေကိုဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံးဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့ မွတ်ဆလင်များဟာ ကမ္ဘာကြီးကို လေထိုးသွင်းပြီး အလုံးဇာတ်ခင်းကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအလုံးဇာတ်ခင်းကြတာလဲဆိုတော့ ကိုရန်ဆိုတာ အင်မတန်လှည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကျမ်းဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံလှည့်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘာသာပြန်နဲ့လှည့်ကြတာပါပဲ။ ကုရ်အာန်ကျမ်း ၇၉:၃၀ မှာ ပထဝီမြေကို ဖြန့်ခင်းတော်မူ၏ လို့ပြောထားတာကို ပထဝီမြေကို ငှက်ကုလားအုတ်ဥပုံ ပြုလုပ်တော်မူ၏ ဆိုပြီး အာရဗီစာမတတ်တဲ့ မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကော မူဆလင်တွေကိုပါ ကမ္ဘာပတ်ပြီး လိမ်ကြညာကြတော့တာပါပဲ။ ဒါလေးကိုနမူနာဖတ်ကြည့်ကြပါ ကမ္ဘာပတ်ကုလားလူလိမ်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကိုရန်ထဲမှာကမ္ဘာပြားတယ်လို့ပြောထားလို့ပဲ ယုံကြတဲ့မွတ်ဆလင်တွေရှိနေဆဲပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြပါ အာရပ်မွတ်ကုလား ဘယ်လောက်တောင်မှ ကိုယ့်ဘာသာဂုဏ်ကိုယ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။
Quran’s Flat Earth Part 167 – Amazing videos are here
Filed under: Uncategorized — mmkafir @ 10:10 pm
အစ္စလာမ်ဘာသာက လူသားတွေကို လူ့အခွင့်အရေး တန်းတူညီမျှပေးတဲ့ဘာသာဆိုပြီး ဝါဒဖြန့်နေကြတာတွေကို ကြားနေရပါတယ်။ အခုအဲဒီအလိမ်အညာတွေကို ဖော်ပါတော့မယ်။ အစ္စလာမ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြုစုပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်းပါ စာပိုဒ်တွေနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါ့မယ်။ အခုဟာကတော့ စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းအတိုချုပ်ကလေးပါ။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ ကျွန်ပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။ မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူသတ်၊ဓားပြတိုက်၊နယ်မြေသိမ်းပြီး ကျွန်ပြု၊ ပြီးတော့တစ်ခြားမြို့မှာပြန်ရောင်းစားပြီး ကျွန်ကုန်သည်အဖြစ်ငွေရှာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြားရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြည့်စရာမလိုပါဘူး မိုဟာမက်ရဲ့မိန်းမ ဆာဖီယာ ဆိုရင်ဖြင့် ဂျူးလူမျိုးကျွန်မတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကိုမိုဟာမက်က အစ္စလာမ်ဘာသာထဲဝင်ရမယ် လက်ထက်ရမယ် အဲဒါဆိ်ုရင် ကျွန်ဘဝကနေလွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဆွယ်ခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်အာရပ်တွေရဲ့ ကျွန်ကုန်ကူးမှုဆိုတာလည်း အရမ်းကိုထင်ရှားပါတယ်။
Qur’an 2:221: Do not marry idolatresses until they believe. A believing slave woman is better thananon-believing free woman; do not get your girls married to unbelievers until they (the unbelievers) convert to Islam.
(အို-“အီမာန်” ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိကြသော “မုအ်မင်န်” အပေါင်းတို့) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောမိန်းမများသည် “အီမာန်” ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဒါတရားမထားရှိကြသမျှ ကာလပတ်လုံး ထိုမိန်းမများနှင့် အသင်တို့သည်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာမပြုကြကုန်လင့်။ အမှန်သော်ကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောမိန်းမတစ်ဦးသည် အသင်တို့အဖို့အကယ်ရွေ့ နှစ်သက်စရာဖြစ်ငြားသော်လည်း “အီမာန်” ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိသော ကျွန်မိန်းမတစ်ဦးသည် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သော) ထိုမိန်းမထက် မုချသာရွေ့ကောင်း၏။ ထိုနည်းတူစွာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သောယောက်ျားသည် “အီမာန်” ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားမထားရှိကြသမျှကာလပတ်လုံး ထိုသူများနှင့် (မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးများကို) ထိမ်းမြားရွေ့ မပေးကြကုန်လင့်။ အမှန်သော်ကားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကိုကိုးကွယ်သူတစ်ဦးသည် အသင်တို့အဘို့ အကယ်ရွေ့နှစ်သက်စရာဖြစ်ငြားသော်လည်း အီမာန် ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားထားရှိသော ကျွန်ယောက်ျားတစ်ဦးသည် (အလ္လ်ာအရှင်မြတ်နှင့်် ယှဉ်တွဲရွေ့ အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သော) ထိုယောက်ျားထက် မုချသာရွေ့ကောင်း၏။ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍အခြားအရာကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် အသင်တို့အား) ငရဲမီးသို့ခေါ်ဆောင်ကြကုန်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှာမူ မိမိ၏ဆန္ဒတော်ဖြင့် (အသင်တို့အား) ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံသို့၎င်း၊ အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနားတော် မူခြင်းသို့၎င်း၊ ခေါ်ဆောင်လျက်ရှိတော်မူ၏။ ထို့ပြင်တဝ ထိုအရှင်မြတ်သည် လူသားတို့ သတိတရား ရစိမ့်သောငှာ မိမိ၏ တရားဒေသနာတော်များကို ထင်ရှားစေတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် ၂ : ၂၂၁)
အစ္စလာမ်မှာ ဘာသာပြောင်းရင် သေဒဏ်ပါ။ အစ္စလာမ်ဥပဒေမကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စွန့်ခွာတဲ့လူတွေကို မွတ်ဆလင်အသိုင်းအဝိုင်းက ရှောင်ကြကျဉ်ကြပါတယ်။ အခုကိစ္စကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးပါ့မယ်။
အောက်ပါ ကျမ်း၃ပိုဒ်မှာတော့ အစ္စလာမ်ကပြဌာန်းထားတဲ့ Freedom of Inquiry လွတ်လပ်စွာ စူးစမ်းမေးမြန်းပိုင်ခွင့်ပါပဲ။ မမေးနဲ့တဲ့ မင်းအရင်ကမေးခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါတရားတွေ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ဆိုလိုတာက အစ္စလာမ်ဘာသာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါက အကုန်အန်ကျမ်းမှာ ပြောထားတာပါ။ ဟာဒီးစ်နှစ်ပိုဒ်မှာ ပြောထားတာကတော့ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေးအမြန်းထူလွန်းတာကို အလ္လာအရှင်မြတ်က တားမြစ်တော်မူတယ် မုန်းတော်မူတယ် ဆိုပဲ။
“O ye who believe! Ask not questions about things which if made plain to you, may cause you trouble. but if ye ask about things when the Qur’an is being revealed, they will be made plain to you, God will forgive those: for God is oft-forgiving, most Merciful.. Some people before you did ask such questions, and on that account lost their faith.” (Surah 5:101-102).
“Narrated Ash-Shabi : The clerk of Al-Mughira bin Shuba narrated, ‘Muawya wrote to Al-Mughira bin Shuba: write to me something which you have heard from the Prophet.’ so Al-Mughira wrote: I heard the Prophet saying, ‘Allah has hated for you three things: vain talks, (useless talk) or that you talk too much about others wasting of wealth (by extravagance). and asking too many questions (in disputed religious matters) or asking others for something (except in great need.) Bukhari vol. 2, Hadith#. 555
“Narrated Al-Mughira bin Shuba: The Prophet said, “Allah has forbidden for you (1) to be undutiful to your mothers, (2) to bury your daughters alive, (3) to not to pay the rights of the others (e.g charity etc.) and (4) to beg of men (begging.) and Allah has hated for you (1) Vain, useless talk, or that you talk too much about othes (2) to ask too many questions (in disputed religious matters) and (3) to waste the wealth (by extravaganace). ” Bukhari vol. 3, Hadith#. 591
ကဲ အခုတော့တော်ကြဦးစို့ရဲ့။ နောက်မှဆက်ဦးမယ်ဗျာ။
အကိုးအကား။ ။ http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း
မရ်ယမ်လား မိရိယံလား တမန်ရှော်ကြီးမသိခဲ့ပါတကား
Filed under: ကုရ်အာန်ကျမ်း,ဘိုင်ဘယ်လ်,မိုဟာမက်,ယေရှု — mmkafir @ 3:08 am
မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ စာမတတ်ပေမတတ် မိဘမဲ့အာရပ် ကုန်သည်တစ်ဦးဟာ အင်မတန်ကိုမှ အာဏာလိုချင်ပါတယ်။ သူ့အသက်၂၅နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ အသက်၄၀အရွယ် မုဆိုးမနှစ်ထပ်ကွမ်း ခဒီဂျာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ခဒီဂျာဆိုတာ သူ့အဖေဆီကနေ ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေရော အရည်အချင်းထက်မြက်မှုပါ အမွေခံရရှိခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ဦးပါ။ အဲဒီတော့ မိုဟာမက်အတွက်ကတော့ ပွပေါက်ပဲပေါ့။ ရီစရာကောင်းတာတစ်ခုက ကိုရန်(၄:၃၄)မှာ ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေရဲ့ ကြီးကြပ်အုပ်ထိန်းသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပေမယ့်လည်း တကယ်တန်းလက်တွေ့မှာ ခဒီဂျာဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးသဘောမျိုး ဖြစ်နေတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ခဒီဂျာဟာ မိုဟာမက်ရဲ့ ကြီးကြပ်အုပ်ထိန်းသူဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အဲဒီလို ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ဒိုင်ခံရှာဖွေခဲ့လို့ပဲ မိုဟာမက်အသက်၄၀အရွယ်ရောက်တော့ ပူပင်ကြောင့်ကြစရာမလိုပဲ ၆လတိုင်တိုင် မက္ကာမြို့ကနေ ၂မိုင်ပဲကွာဝေးတဲ့ ဟီရာတောင်ထိပ်က ကျောက်ဂူထဲမှာ တရားအားထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ ခဒီဂျာထက် ၁၅နှစ်ငယ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိုဟာမက်ပထမဦးဆုံး အလာကြီးဆီကနေ အမိန့်စရတဲ့အချိန်မှာ ခဒီဂျာဟာ အသက်၆၅နှစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ ၆၅နှစ်အဖွားကြီးက ၄၀အရွယ်လူလတ်ပိုင်းတစ်ဦးကို ရှာကျွေးထားတာနော်။ အဲဒါကိုပဲကြည့်ပါ မိုဟာမက်ဆိုတာ မိန်းမထမီနားခိုစားနေတဲ့ မုဆိုးမလင်တစ်ဦးထက်မပိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း လောဘသားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံရုံနဲ့တင် မကျေနပ်မရောင့်ရဲနိုင်ပါဘူး အာဏာပါလိုချင်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက်၄၀အထိ ကုလားအုပ်တစ်သိုက်နဲ့ ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့ရာကရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ သူစဉ်းစားတွေးခေါ်မိတာတွေကို ပေါင်းပြီးတော့ အလာကြီးဆီက အမိန့်ကျရောက်တယ်ဆိုပြီး ဖောရှောစလုပ်တော့တာပါပဲ။ သူကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တုန်းက ဂရိလူမျိုးပညာရှင်တွေ၊ အီဂျစ်လူမျိုးပညာရှင်တွေ၊ ပါရှားလူမျိုးပညာရှင်တွေ၊ ခရစ်ရှန်တွေ၊ ဂျူးတွေဆီကနေ ပညာရပ်အမျိုးမျိုး အယူဝါဒအမျိုးမျိုးကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ မိုဟာမက်ဟာ စာမတတ်ပေမတတ်ပါ။ သူရခဲ့တဲ့ပညာရပ်တွေက သူတစ်ပါးပြောစကားကို နားရည်ဝနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါမို့လို့ပဲ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတနဲ့ အတွေးအခေါ်ပေါင်းစပ်ပြီး အလာကြီးဆီကလာတဲ့ အမိန့်တော်ဆိုပြီး ဖောရှောလုပ်ရာမှာ အမှားတွေတစ်သီကြီးပါနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အကုန်အန်ကျမ်းဆိုတဲ့ ယနေ့မွတ်ဆလင်တွေ တမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရွတ်ဖတ်နေကြတဲ့ အမှားတွေဗရပွနဲ့ ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်လာတာပါပဲ။ မိုဟာမက်ကပညာသာမတတ်တာ လူလည်ခင်ဗျ။ သူ့ကိုယ်သူတမန်တော်လို့ပြောရင် အဲဒီခေတ်ကလူတွေက လက်မခံမှာစိုးလို့ ခရစ်ရှန်ဘာသာနဲ့ ဂျူးဘာသာကို မွေးစားခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူ အေဘရာဟမ်ရဲ့ ဘုရားသခင်ဆီကလာတဲ့ တမန်တော်ပါဆိုပြီး ဖောခဲ့တာပါ။ ဟုတ်ပြီ အေဘရာဟမ်တို့ရဲ့ တမန်တော်မျိုးဆက်ဆိုရင် အေဘရာဟမ်ရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လောက်တော့ အမှားမရှိအောင် သိထားရမှာပေါ့နော်။ ကဲကြည့်ရအောင်
၎င်းနောက် ထိုမရ်ယမ်သည် ယင်းသားရတနာကို မိမိရင်ခွင်ဝယ်ပွေ့ချီလျက် မိမိအမျိုးသားတို့ထံ လာခဲ့လေ၏။ ထိုအခါယင်း အမျိုးသားတို့က ဤသို့ပြောကြားခဲ့ကြကုန်၏။ အို-မရ်ယမ် အသင်မ သည် အလွန်ဆိုးဝါးလှသောပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည် တကား။
အို-ဟာရူန်၏နှမ၊ အသင်မ၏ ဖခင်မှာလည်း အကျင့်မကောင်းသူ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အသင်မ၏မိခင်မှာလည်း အကျင့်ပျက်သူတစ်ဦး မဟုတ်ခဲ့ချေတကား။
အခုအပိုဒ်ကတော့ ကိုရန်ကျမ်းရဲ့ ၁၉ခုမြောက်စူရာဖြစ်တဲ့ စူရာမရ်ယမ်က ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစူရာတစ်ခုလုံးမှာ ယေရှုရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ မေရီအကြောင်းကိုပဲပြောထားပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ မိုဟာမက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူတမန်တော်လုပ်ချင်တော့ ခရစ်ရှန်ဘုရား ယေရှုနဲ့မယ်တော်မာရီယာကိုလည်း မွတ်ဆလင်လုပ်ပစ်လိုက်တော့တာပါပဲ။ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာလိုပေါ့ ခိုးကူးမယ့်ကူးတော့လည်း ပိရိအောင် ဆရာမ မသိအောင်ကူးပေါ့နော်။ ခိုးကူးရဲ့သားနဲ့ အမှားပါနေရင်တော့ ရုပ်ဆိုးလွန်းလှပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် မှားတာကတစ်ပြစ် ခိုးကူးတာကတစ်ပြစ်ပါ အပြစ်ပိုကြီးပါတယ်။ အခုကျမ်းပိုဒ်ထဲက ထင်ရှားတဲ့အမှားတစ်ခုကတော့ မေရီကို ဟာရူန်၏နှမဆိုပြီး ခေါ်ထားတာပါပဲ။ ဘိုင်ဘယ်လ်ထဲမှာပါတဲ့ ယေရှုရဲ့အမေကို ကိုရန်ထဲမှာ မရ်ယမ်လို့ အာရဗီလိုခေါ်ပါတယ် အဲဒါလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တမန်ရှော်ကြီးမသိတာက သူပြောနေတဲ့ ဟာရူန်ရဲ့နှမ မရ်ယမ်ဆိုတာ ယေရှုရဲ့အမေ အပျိူစင်မာရီမဟုတ်တာပါပဲ။ တိုရာကျမ်းထဲမှာ မောရှေ၊ အာရွန်၊ မိရိယံဆိုပြီး မောင်နှမသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ ကိုရန်ထဲမှာတော့ မူဆာနဲ့ဟာရူန်ဆိုပြီး မွေးစားထားပါတယ်။ ဂျူးတွေ ခရစ်ရှန်တွေရဲ့ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ဆီကလာတယ်ဆိုတဲ့ တမန်တော်ဟာ မာရီနဲ့ မိရိယံနဲ့တော့ခွဲသိရမှာပေါ့နော။ မိရိယံအကြောင်း ဓမ္မဟောင်းထဲမှာ ဘာပြောထားလည်းဆိုတော့-
အာရုန်၏အစ်မဖြစ်သော ပရောဖက်မ မိရိအံသည် ပတ်သာကိုကိုင်၍၊ မိန်းမအပေါင်းတို့သည် ပတ်သာတီးလျက်၊ ကလျက်လိုက်သွားကြ၏။ မိရိအံကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုန်းပွင့်လျက် အောက်ပွဲကို ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်အား သီချင်းဆိုကြလော့။ မြင်းနှင့်မြင်းစီးသူရဲကို ပင်လယ်ထဲသို့ လှဲချတော်မူပြီဟု သူတို့နှင့် အသံပြိုင်၍ဆိုလေ၏။
ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာပြောထားတဲ့ အာရုန်၏အစ်မ(Sister of Aaron) ဆိုတာ မောရှေရဲ့အစ်မလည်းဖြစ်တဲ့ တမန်တော်မ မိရိအံ(Miriam) ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပြီး မိုဟာမက်ပြောတဲ့ ဟာရူန်၏နှမ(Sister of Aaron) ဆိုတာ ယေရှုအမေ အပျိုစင်မာရီကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်ဘယ်လ်ထဲမှာ တစ်ခြားအသုံးအနှုန်းတစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Daughter of Aaron ဆိုတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အာရုန်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များတဲ့။ မောရှေရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ အာရုန်ဆိုတာ ဂျူးဘုန်းကြီးသာသနာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အာရုန်ရဲ့ အောက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေထဲက အမျိုးသမီးတွေကို Daughter of Aaronဆိုပြီးခေါ်တာပါပဲ။ Descendant of Aaronလို့လည်းသုံးပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ယေရှုအမေ အပျိုစင်မာရီဟာ အာရုန်ရဲ့မျိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အာရုန်ဟာ လေဝိအမျိုး(Tribe of Levi)ကဖြစ်ပြီး မာရီဟာ ဂျူဒါတော( Desert of Judea)က လာတာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုရန်ထဲက ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ အမှားတစ်ခုကို စာဖတ်သူများ သိရပြီပေါ့။ စာမတတ်ပေမတတ် ဘိုင်ဘယ်လ်မဖတ်တတ်တဲ့ တမန်တော်ကြီးက ကြားဖူးနားဝလေးနဲ့ ရွှီးတော့ အဲဒီလောက်တော့ မှားမှာပေါ့နော။
Filed under: ကုလား,မွတ်ဆလင်,ရိုဟင်ဂျာ — mmkafir @ 6:13 pm
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များအတွင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိပေ။ မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကပင် အခြချနေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့ သည် ရခိုင်ပြည်လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ ထို့အပြင်( ၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရလည်းကောင်း ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှု ဥပဒေ နှင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေများအရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပင်မနိုင်ငံအဖြစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးစု များဖြစ်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြု ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံသား ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်ခြင်းသည် ကိုးကွယ်မှု ၊ ယုံကြည်မှု ၊ ဘာသာစကား ၊ အရုပ်သဏ္ဍန် ၊ အမျိုးအနွယ်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ ရှေးအစဉ်အဆက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတခုအတွင်းရှိဒေသ နှင့်သာသက်ဆိုင် သည်ဟု သမိုင်းစာအုပ်အချို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အေဒီ ၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ဗမာဘုရင်သိမ်းပိုက်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်း မွန်စွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဂေါလ် ဆူလတန်ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင် မြောက်ဦးမြို့တည်၍ မြောက်ဦးခေတ်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦးခေတ်တွင် ရခိုင့် တပ်မတော်၌ အာရပ်မှစစ်သည်တော်များ၊ ဥရောပမှ ပေါ်တူဂီများနှင့် ဂျပန်တို့ပါအမှုတော်တမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရ သည်။ ယင်းအာရပ်မှစစ်သည်တော် မျိုးဆက်အများစုမှာ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် မြောက်ဦးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းတို့ကိုရခိုင်တို့က ကမန်ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ရခိုင်ပြည်၌ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုထားပါသည်။ ယင်းမူဆလင် ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုးတို့သည် ရခိုင်ပြည်၌ ပြဿနာဖန်တီးခြင်း၊ ရခိုင်တို့နှင့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးခြင်းမျိုးကို လုံးဝပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ရခိုင်ပြည်နှင့်ရခိုင် လူမျိုး အပေါ် သစ္စာရှိရှိဖြင့် ရခိုင်တို့နှင့် အေးအတူ ပူအမျှ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသောလူမျိုး တမျိုးဖြစ်သော ကြောင့် ရခိုင်ပြည်၌ ဤကဲ့သို့ မူဆလင် ဘာသာကိုးကွယ်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုး ရှိသည်ကိုပင်သတိပြု မိကြဖူးမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် မိမိကိုမိမိ ရိုဟင်ဂျာဟု ကြွေးကြော်နေသူများမှာ ၁၈၂၅-နောက်ပိုင်း ရခိုင်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ၀င်ရောက်လာသော မူဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် စစ်တကောင်းတောင်းတန်းနေ ဘင်္ဂလီများသာ ဖြစ်သည်။
၁၈၂၅-တွင် ရခိုင်ပြည်၌ မူဆလင်ဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၃၀ ပြည့်တွင် ၂၁၇၈၀၀-ရှိခဲ့ရာ ဗြိတိသျှအစိုးရက မူဆလင်ဦးရေ တိုးလာမှုကိစ္စကို စိုးရိမ်လာသောကြောင့် အခြေအနေစုံစမ်းရန် ၁၉၃၉ ၌စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တခု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်က မူဆလင်ဦးရေ အတားအဆီးမရှိ တိုးဝင်လာမှုကို မဟန့်တားပါက နောင်အခါ၌ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြောင့် မည်သို့မျှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ အစီရင်ခံသည့် အတိုင်းပင် ၁၉၄၂-တွင် ကုလား-ရခိုင်အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ရွာအား လုံး ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ရခိုင်တချို့မှာ ပြည်တွင်းသို့ဝင်ပြီး၊ တချို့မှာ အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက် ဒိန်နာဂ်ျပူသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရ သည်။
၁၉၄၂-ဂျပန်များဝင်လာသောအခါ ရခိုင်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ကုလားအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးအသွင်ပြောင်းကာ ဂျမေယာတူ အိုလမာအသင်း ဖွဲ့စည်းကြသည်။ အဖွဲ့ဥက္ကဌမှာ အုံမော်မျာ (ဘီအေဘီအယ်လ်) ဖြစ်သည်။ အုံမော်များ အဖွဲ့သည် အနောက် ပါကစ္စတန်မှ အော်လနာမူဟာမတ် မူဇဟတ်ခန်နှင့် မော်နာအီဗြာဟိန်း တို့ကိုခေါ်၍ မူဂျာဟိန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြသည်။ ပါကစ္စတန်နယ်သို့ ရခိုင်ပြည်ထည့်သွင်းရေး အစီစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်ရေးအရ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော မူဂျာဟိန်းတို့သည် အခြား တိုင်းရင်းသားများနည်းတူ အခွင့်အရေးရလို၍ မစ္စတာဂေါ်ဖားက ရိုဟင်ဂျာဟူသော လူမျိုးသစ်တခုကို ၁၉၅၀- စက်တင်ဘာလထုတ် ဂါဒီးယန်းသတင်းစာတွင် အသက်သွင်းခဲ့သည်။
သို့သော် ၁၉၅၁- ဇွန်လတွင်ကျင်းပခဲ့သော အလယ်သံကျော် မူဆလင်ညီလာခံကမူ ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘဲ ဗမာ မူဆလင် ကဲ့သို့ ရခိုင်မူဆလင်လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်တို့က ငါတို့ရခိုင်တွင် မူဆလင် ဘာသာဝင် မရှိဟု ပြောလာကြသောအခါ ရိုဟင်ဂျာဘက်သို့ ဖေါက်ထွက်ရန် ထွက်ပေါက်ရှာ လာကြသည်။ ၁၉၆၀-ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရိုဟင်ဂျာသတင်းစာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသားအသင်းထိ လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြသည်။၁၃၊ ၅၊ ၈၈ – နေ့က မောင်တောမြို့နယ်တွင် အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ကုလားလှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန့်သည် မောင်တောမြို့ကို အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ ၀ိုင်းပြီးဟစ်အော်ကြွေးကြော် မီးရှို့သတ်ဖြတ် ရန်ချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ညနေရှစ်နာရီခွဲမှ နောက် တနေ့နံနက် ၃-နာရီခွဲအထိ ကြာခဲ့သည်။ သူတို့ ဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင် အလိုကျတိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ မင်းတို့ တိုင်းပြည်ငါတို့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ ဟစ်အော်ကြ သည်။
၁၉၄၂ မတိုင်မှီက မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိခဲ့သော ရခိုင်ရွာပေါင်း ၁၉၅-ရွာမှာ ၁၉၉၂ တွင် ၄၆ ရွာသာ ကျန်ပါတောသည်။ ကျန်ရွာများအား မူဆလင်များက လူဦးရေအသာစီးရမှုဖြင့် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ ရိုဟိန်ဂျာ ဆိုသူများပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။
Filed under: ကိုင်ရို,မွတ်ဆလင်,အစ္စလာမ်,အိုဘားမား,အီဂျစ်,အမေရိကား — mmkafir @ 8:03 am
၂၀၀၉ခုနှစ် ဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ကပဲ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့က ကိုင်ရိုတက္ကသိုလ်မှာပဲ မွတ်ဆလင်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သူသမ္မတလောင်းဖြစ်စဉ်ကာလ မဲဆွယ်ခဲ့တုန်းက ကတိအတိုင်း လုပ်ဆောင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းမယ် သမ္မတဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာကို အလည်အပတ်သွားရောက်ပါ့မယ် ဆိုပြီး မဲဆွယ်ခဲ့တာကို အမှတ်ရကြမှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီနေ့က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ Youtube ဖွင့်ကြည့်ရာမှာ သူအခုမိန့်ခွန်းပြောနေတာနဲ့ ကြုံနေတာမို့ ကျွန်တော်အဲဒီမိန့်ခွန်းတစ်ခုလုံးကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ မိန့်ခွန်းကတော့ အိုဘားမားရဲ့ပေါ်လစီအတိုင်းပါပဲ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သင့်မြတ်အောင်ပေါင်းသင်းရေး၊ အပြုသဘောဆောင် ချဉ်းကပ်မှုတွေကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဒီမိန့်ခွန်းမှာ သူက အမေရိကားနဲ့ အစ္စလာမ်ကို ခွဲခြားလို့မရပါဘူး ဆိုပြီးတော့ အစ္စလာမ်ကောင်းကြောင်းတွေကို ပြောသွားပါတယ်။ ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ဟာကွက်တွေ အမှားတွေအများကြီး ရှိနေတဲ့အပြင် သူကကိုရန်ကျမ်းထဲက စာပိုဒ်လေးတစ်ချို့ကို ထုတ်ပြောသွားတာက လွဲနေပါသေးတယ်။ လွဲတာက စာလုံးလေးနည်းနည်းပါးပါးပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီဘုရင်တို့လို ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး အာဏာရှင်တွေကိုလည်း ချီးမွမ်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အံ့ဩပါရဲ့ အစ္စလာမ်ကို ချီးမွမ်းရုံတင်မက အာဏာရှင်တွေကိုပါ ချီးကြူးတာမျိုးကတော့ တည့်အောင်ပေါင်းတာတင်မကတော့ပဲ ဖားနေသလိုပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီမိန့်ခွန်းတစ်ခုလုံးက မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာကို ဖားတဲ့ မွတ်ဖားမိန့်ခွန်းသဘောမျိုး ဖြစ်သွားပါလေရော။ သူပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံးကို ကိုရန်ကျမ်းကောက်နှုတ်ချက်တွေ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေနဲ့တင်ပဲ ချေဖျက်လို့ရပါတယ်။ အခုတော့သူပြောသွားတဲ့အထဲက ကျမ်းကိုးကျမ်းကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှားတွေကို ပြောပြပါ့မယ်။
Filed under: ကုလားအုတ်သေး,မိုဟာမက် — mmkafir @ 9:33 am
ဒီပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Sahih Bukhari Book 1, Volume 4, Number 234
Filed under: မီးရှို့,ဟီဂျပ်ဘ်,အမျိုးသမီး — mmkafir @ 8:30 am
၂၀၀၉ခုနှစ် မတ်လပိုင်း ၈ရက်နေ့ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားအပြီးမှာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ဆီးရီးယားအမျိုးသမီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဟောင်း ဆာရာ အက်ဇ်မေး ရပ်စ်မူစန် ဟာ လူအုပ်ကြားထဲမှာပဲ သူ့ခေါင်းပေါ်က ဟီဂျပ်ဘ်ကိုချွတ်ပြီး မီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ မီးမရှို့ခင်မှာလည်း လူသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ သာတူညီမျှမှု၊ မေတ္တာတရား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် မီးထွန်းညှိပါရစေဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အင်မတန်ကိုမှ ရဲရင့်လှတဲ့အမျိုးသမီးပါပဲ မွတ်စလင်လူရမ်းကားတွေ ကြားထဲမှာ သူ့အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်တာကိုတောင် မမှုပဲ လူထုကို လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။
Filed under: ကုရ်အာန်,မိုဟာမက်,သုံ့ပန်း,အမျိုးသမီး — mmkafir @ 10:49 pm
၎င်းအပြင် အမျိုးသမီးများအနက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်သော (၀ါ) လင်ရှိ မိန်းမများ သည်လည်း ထိမ်းမြားရန်တားမြစ်ပြီးဖြစ်ချေ သည်၊ သို့ရာတွင် အကြင်မိန်းမများသည် အသင်တို့ လက်တွင်းသို့ သုံ့ပန်းအဖြစ်နှင့် ရောက်ရှိလာကြသော် ထိုသို့ လင်ရှိသုံ့ပန်းမိန်းမများကိုပင် ထိမ်းမြား ပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်။ ဤသည် အသင်တို့အပေါ်၌ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အထံတော်မှ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သောအမိန့်တော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ထိုဖော်ပြပါ မိန်းမတို့မှတပါး အခြားသော မိန်းမများကို အသင်တို့အဖို့ “ဟလာလ်”ပြုလုပ် ထားတော်မူသည်။ ဆိုလိုသည်ကား အသင်တို့သည် ထိုမိန်းမများကို မိမိတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများဖြင့် ကာမဂုဏ် လိုက်စားသူများ အဖြစ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သောသူများအဖြစ်နှင့် (၀ါ)ထိမ်းမြားလက်ထပ်ယူသောသူများအဖြစ်နှင့် ရှာဖွေတောင်းဆို ထိမ်းမြားကြကုန်။ ပြီးနောက် အသင်တို့သည် ထိုမိန်းမများနှင့် ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူး ခံစား ခဲ့ကြသည်ရှိသော် အသင်တို့သည် ထိုမိန်းမများအား သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သော မဟ်ရ်ကိုပေးကြကုန်။ သို့ရာတွင် အကယ်၍ အသင်တို့သည် ယင်းကဲ့သို့ မဟ်ရ်ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် တွင် ထိုမဟ်ရ်ကို တိုးခြင်း၊ လျှော့ခြင်း၊ လုံးဝ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၌ မိမိတို့အချင်းချင်း သဘောတူ ကျေနပ်ကြပါမူ အသင်တို့အပေါ်၌ အပြစ်တစုံတရာ မရှိချေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မုချဧကန် အရာ ခပ်သိမ်းတို့ကို အကြွင်းမဲ့ သိတော်မူသော အရှင်၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အရှင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
ဆော်ဒီဘုရင့်ပုံနှိပ်တိုက်မှရိုက်နှိပ်သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်မြန်မာဘာသာပြန်မှ တာ့ဖ်ဆီးရ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ-
ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသော အမျိုးသမီးများတွင် လင်ရှိမိန်းမများလည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ လင်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်ကို ထိုသူ၏ ခင်ပွန်းက ကွာရှင်း၍ လင်ကွာ “အစ်ဒ်ဒတ်” ရက်မကုန်ဆုံးသမျှ ကာလပတ်လုံး ထိုသို့သော မိန်းမတစ်ဦးအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၌မျှ ထိမ်းမြားပိုင်ခွင့်မရှိချေ။ သို့ရာတွင် အကယ်၍ လင်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်သည် စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ်နှင့် အကြင်မွတ်စ်လင်မ် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လက်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော် ထိုမွတ်စ်လင်မ်သည် မိမိ၏ လက်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော ထိုလင်ရှိမိန်းမအား တရားတော်နှင့်အညီ ထိမ်းမြားယူနိုင်ပေသည်။
ဥပမာ- “ဒါရုလ်ဟရ်ဗ်” ခေါ် ကာဖိရ်နိုင်ငံကို မွတ်စ်လင်မ် စစ်သည်တော်များ ချီတက်တိုက်ခိုက်အံ့၊ ကာဖိရ်နိုင်ငံတွင် အချင်းချင်း ထိမ်းမြားထားသော ဇနီးမောင်နှံများရှိအံ့၊ မွတ်စ်လင်မ် စစ်သည်တော်များသည် လင်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်ကို စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီး၍ ဒါရုလ်အစ္စလာမ်ခေါ် အစ္စလာမ်နိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာအံ့၊ ထိုအချိန်တွင် လက်ရှိမိန်းမအား ဒါရုလ်ဟရ်ဗ်၌ အသက်ထင်ရှားရှိနေသော ထိုသူမ၏ လင်ခင်ပွန်းက ကွာရှင်းခြင်း မပြုသော်လဲ ထိုမိန်းမအား ပိုင်ဆိုင်သော အကြင်မွတ်စ်လင်မ် ယောက်ျားသည် တရားတော်စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အစ်ဒ်ဒတ် ရက်ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ထိမ်းမြားယူနိုင်ပေသည်။ ထိုမိန်းမ၏ အစ်ဒ်ဒတ်ရက်မှာ ရာသီသွေး တစ်ကြိမ်ဆင်းခြင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ကလေးမျက်နှာမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကဲ မွတ်စလင်တွေဖြေကြပါ။ အကယ်၍ ရန်သူစစ်တပ်ကြီးက ခင်ဗျားတို့မြို့ကိုလာသိမ်းပိုက်ပြီး အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီး၊ ခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်တွေကိုသတ်၊ တစ်ချို့ကိုကျွန်ပြုပြီး တစ်ခြားမြို့တစ်မြို့မှာ ကျွန်အဖြစ်ပြန်ရောင်းစား၊ ခင်ဗျားတို့လက်ထပ်ထားတဲ့ ဇနီးမယားတွေကို တရားတော်နဲ့အညီ လက်ထပ်တယ်ကွာဆိုပြီး မတရားသိမ်းပိုက်ရင် ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ကြပါ။ အမျိုးသမီးဘက်က သဘောမတူရင် အဲဒါမုဒိမ်းမှုမြောက်တယ်။ အီရတ်၊ အာဖဂန်မှာ အမေရိကန်စစ်သားတွေ ခင်ဗျားတို့ မွတ်စလင်မတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ရင် တရားစွဲလို့ရတယ် အရေးယူဖို့စစ်ခုံရုံးတွေရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မွတ်စလင် စစ်သားတွေ လူသတ်မုဒိမ်းကျင့်တာကြတော့ အရေးယူမယ့်သူဘယ်သူမှ မရှိပါလား။ အဲဒါလား ခင်ဗျားတို့ အလာကြီးရဲ့ အာယတ်တော်ဆိုတာ။ တကယ်တန်းကတော့ စစ်တိုက်ပြီး ကာမဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ တဏှာဘီလူး အာရပ်စစ်သားတွေအကြိုက်မို့ မိုဟာမက်ကြီးက ဒီဥပဒေကို အလာကြီးက ပြောသယောင်ယောင်နဲ့ ဖောခဲ့တာပါ။ တစ်လောကလုံးကို ဖန်ဆင်းမွေးမြူတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးက ဒီလိုမျိုး ကျွန်ပြု၊ မုဒိမ်းကျင့်တွေကို မိန့်စရာလား စဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းနေပြီ။
Filed under: ကမ္လာ,ကုရ်အာန်,လ,သိပံ,အမှား,နေ,ဂြိုလ် — mmkafir @ 2:47 pm
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ပင်လျှင် မိုးကောင်း ကင်များကို အသင်တို့တွေ့မြင်ကြသည့်အတိုင်း တိုင်များမပါဘဲ မြင့်စွင့်စေတော်မူခဲ့သောအရှင် ဖြစ်တော်မူပေသည်။ ထို့နောက် ထိုအရှင်မြတ်သည် “အရ်ရှ်” ပလ္လင်တော်ထက်ဝယ် စံမြန်းတော်မူလေသည်။ ထိုမှတစ်ပါး ထိုအရှင်မြတ်သည် သူရိယနေကို လည်းကောင်း၊ လစန္ဒာ ကိုလည်းကောင်း နာခံစေ တော်မူလေသည်။ ထိုနေနှင့်လသည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန် ကာလတွင် အသီးသီး သွားလာလျက်ပင် ရှိကြကုန်၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရေးကိစ္စတို့ကို စီမံခန့်ခွဲတော်မူ၏။ သက်သေလက္ခဏာတော်များကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတော်မူ၏။ သို့မှသာလျှင် အသင်တို့သည် မိမိတို့အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းကို ယုံကြည်ကြရာသတည်း။
ဆော်ဒီဘုရင့်ပုံနှိပ်တိုက်မှရိုက်နှိပ်သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်မြန်မာဘာသာပြန်မှ တာ့ဖ်ဆီးရ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ-
ဂြိုလ်များသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ဖြင့်သာလျှင် သွားလာလှုပ်ရှားနေကြသည်။ နေနှင့်လတို့သည်လည်း ထိုအရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ဖြင့် ထိုအရှင်မြတ် သက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်ထားတော်မူသည့် အတိုင်းအတာနှင့်အညီ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြပေသည်။ နေသည်မိမိ၏ ခရီးစဉ်ကို တစ်နှစ်တွင် ပြည့်စုံစေသည်။ လသည် မိမိ၏ခရီးစဉ်ကို တစ်လတွင် ပြည့်စုံစေသည်။ နေနှင့် လသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ဖြင့် စနစ်တကျ သွားလာလှုပ်ရှားလျက် ကမ္ဘာ့အဝန်းကို အကျိုးပြုလျက်ရှိပေသည်။ ဤသည့် သွားလာလှုပ်ရှားမှုကား ကိယာမတ် တိုင်တည်ရှိနေပေမည်။
နေနှင့်လများသည် ကိုးကွယ်ရာမဟုတ်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်အရ သွားလာလှုပ်ရှားနေရသော အဖန်ဆင်းခံ၊ အစေခံများသာဖြစ်သည်။
အစ္စမေးလ် ဘင်ခါသီးရ်၏ အဌကထာဖွင့်ဆိုချက်မှာ-
(And the sun runs on its fixed course foraterm (appointed).)[36:38] It was also said that the meaning is: until they settle under the Throne of Allah after passing the other side of the earth. So when they, and the rest of the planetary bodies reach there, they are at the furthest distance from the Throne. Because according to the correct view, which the texts prove, it is shaped likeadomb, under which is all of the creation. It is not circular like the celestial bodies, because it has pillars by which it is carried. This fact is clear to those who correctly understand the Ayat and authentic Hadiths. All the (praise is due to) Allah and all the favors are from Him. Allah mentioned the sun and the moon here because they are among the brightest seven heavenly objects. Therefore, if Allah subjected these to His power, then it is clear that He has also subjected all other heavenly objects.
၎င်းပြင် နေသည်လည်း သက်သေလက္ခဏာ တစ်ရပ်ပင်။ ထိုနေသည် မိမိသွားလာရာလမ်း အတိုင်း သွားလာလျက် ရှိနေလေ၏။ ဤသည်ကား အလွန်တရာ နိုင်နင်း လွှမ်းမိုးတော်မူသော အကြွင်းမဲ့ သိရှိတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ တိုင်းတာ သတ်မှတ်ချက်ပင် ဖြစ်၏။
ဆော်ဒီဘုရင့်ပုံနှိပ်တိုက်မှရိုက်နှိပ်သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်မြန်မာဘာသာပြန်မှ တာ့ဖ်ဆီးရ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ-
နေသည် မိမိအဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သက်မှတ်ထားတော်မူသည့် လမ်းကြောင်းတွင် သတ်မှတ်ထားတော်မူသည့် ခရီးနှုန်းထားအတိုင်း တိကျမှန်ကန်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားလျက် ရှိပေသည်။ သတ်မှတ်ထားတော်မူသည့် လမ်းကြောင်းမှ တစ်လက်မခန့်မျှ တိမ်းစောင်းသည်လည်းမရှိ၊ သက်မှတ်ထားတော်မူသည့် အချိန်မှ တစ်မိနစ်ခန့်မျှ စောသည်၊နှေးသည် ဟူ၍လည်း မရှိ။ ဤသည် အတိုင်းမသိ ဉာဏ်တော်၊တန်ခိုးတော် ကြီးမားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု တစ်ရပ်ပင်။ နေသည် ကိယာမတ် ဖြစ်ခါနီးအချိန်ထိ ဤအတိုင်းပင် သွားလာလှုပ်ရှားလျက် ရှိပေမည်။ ကိယာမတ်ဖြစ်ရန် အချိန် လုံးဝနီးကပ်လာသောအခါ နေသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်အရ နေဝင်ရာ အနောက်အရပ်မှ ပြောင်းပြန်ပြန်လည်ထွက်လာပေမည်။ ထိုသည့်အချိန်မှစ၍ (တောင်ဗာဟ်) ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း၏ တံခါးပိတ်သွားပေမည်။ (ဝါ) ဝန်ချတောင်းပန်ခွင့် ရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။
Filed under: မယား,မိုဟာမက်,အဆိပ်,အိုင်အေရှာ,သေ — mmkafir @ 3:56 pm
ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံးကမွတ်ဆလင်တွေ အင်မတန်ကိုမှကြည်ညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ အာလာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ သမိုင်းတစ်လျောက်လုံးမှာ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက်ဟာ ၆၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာ အာလာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်တော်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသေခင်မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘယ်တွေရောက်ခဲ့လဲ ဘာလို့သေတာလဲစတဲ့ အချက်တွေဟာ အင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း အစ္စလာမ်စာပေတွေမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ မိုဟာမက်ရဲ့ ဘဝနောက်ဆုံးခရီးကို ကျမ်းကိုးကျမ်းကားများနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပြပါမယ်။
ခါအိဘာလို့ခေါ်တဲ့ မဒီနာမြို့နားမှာရှိတဲ့ ဂျူးတွေနေထိုင်တဲ့ အိုအေစစ်လေးကို မိုဟာမက်တို့ သူပုန်တစ်အုပ်က ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါသတဲ့။ အဲဒီနောက်မှာ မိုဟာမက်အတွက်ဆိုပြီး အဲဒီကဂျူးတွေက သိုးသားကင်ကို အဆိပ်ခပ်ပြီး ဆက်သပါသတဲ့။ ဒါနဲ့မိုဟာမက်ကြီးက ရှိရှိသမျှဂျူးတွေ သူ့ရှေ့မှာလာရောက်စုစည်းရမယ်ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ စစ်မေးတော့တာပါပဲ။ ဂျူးတွေကနောက်ဆုံး ဝန်ခံပါတယ် သူတို့အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့အကြောင်းကို။ ဘာလို့ခပ်လဲဆိုတော့ မိုဟာမက်ကသာလူလိမ်လူညာဆိုရင် အပြတ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် တမန်တော်သာဆိုရင်တော့ အဆိပ်ဒဏ်သင့်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိချင်လို့ပါ ဆိုပြီးဖြေကြပါတယ်။ မိုဟာမက် အဆိပ်မိသွားလေပြီ!(ဆဟီး ဘူခါရီ အတွဲ ၄၊ စာအုပ် ၅၃၊ နံပါတ် ၃၉၄)
ဂျူးအမျိုးသမီးတစ်ယောက် အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့ သိုးသားဟင်းကို တမန်တော်ကြီးက စားမိပါသတဲ့။ အဲဒီမိန်းမကိုသတ်ရမလားလို့ သူ့လူတွေကမေးတော့ တမန်တော်မြတ်ကြီးက ဟင့်အင်းလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ အလာ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ အာခေါင်မှာ အဆိပ်မိတဲ့ လက္ခဏာကို မြင်နေရပါသေးတယ်တဲ့။ ပြောတဲ့လူက အာနက်စ်ဘင်မာလစ်ခ် ဆိုတဲ့မိုဟာမက်ရဲ့ သာဝကတစ်ဦးပါ။(ဆဟီး ဘူခါရီ အတွဲ ၃၊ စာအုပ် ၄၇၊ နံပါတ် ၇၈၆)
မိုဟာမက်က သူ့ဘေဘီလေးအိုင်အေရှာကို တစ်ခါပြောဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကသူစားခဲ့တဲ့ အစာမှာပါတဲ့အဆိပ်က သူ့နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောမကြီးကို ဖြတ်တောက်နေသလားထင်ရအောင်ကို ဝေဒနာခံစားနေရတုန်းပဲဆိုပြီး။(ဆဟီးဘူခါရီ အတွဲ၅ စာအုပ်၅၉ နံပါတ်၇၁၃)
တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ ရောဂါဝေဒနာ သက်သာရာသက်သာကြောင်း ပျောက်ကင်းရာပျောက်ကင်းကြောင်းကို အာယက်တော်တွေကို တစ်ဆင့်ခံထုတ်ပြန်ပို့ချတဲ့ ဂါဗြေလဆိုတဲ့ အတောင်ပံ၆၀ပါ အိန်ဂျယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပါ အလာအရှင်မြတ်ဆီကို ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အင်း အိန်ဂျယ်ကိုယ်တိုင်ကတောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့တာနော်။(Ibn Sa’d စာမျက်နှာ ၂၆၅)
တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ ရောဂါပိုဆိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ တမန်တော်ကြီးက သူ့လူတွေကို ရေတွင်းအသီးသီးစီက ရေခုနှစ်ပုံးကိုခပ်ပြီးသူ့ကိုလောင်းခိုင်းပါတယ်။ လောင်းလဲလောင်းကြရော မိုဟာမက်က တော်ပြီတော်ပြီဆိုပြီး အော်ပြောပြီးတော့ကိုရပ်ခိုင်းရပါတယ်။ သနားစရာ ကုလားမသာပါလား:)။(Ibn Hisham page 679)
မိုဟာမက်ဖြီးပုံလေးပါ သူမမာမကျန်းဖြစ်နေတုန်းလူနာလာမေးတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကို ဖြီးပုံလေးပါ။ သူနှစ်ဆတိုးပြီးကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် ဆုလာဒ်တော်တွေနှစ်ဆရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သူများတွေကထင်ကြတာ သူ့ရောဂါက အဆုတ်အမြှေးရောင် ရောဂါပေါ့ ဒါပေမယ့် တမန်ရှော်ကြီးပြောလိုက်မှပဲ ရီရတော့တယ်။ အဆုတ်အမြှေးရောင်ရောဂါဆိုတာက ရှိုက်တန်လက်ချက်ပဲတဲ့ အဲဒါမို့လို့အလာအရှင်မြတ်က သူ့တမန်တော်အပေါ်မှာ ဖြစ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ တမန်ရှော်ကြီးပြောလိုက်တော့မှပဲ အဆုတ်အမြှေးပါးထဲ ပိုးဝင်တဲ့ရောဂါက ရှိုက်တန်လက်ချက် ဖြစ်ရတော့တယ်ဗျား။(Ibn Sa’d page 294)
သူတော်ကောင်း တမန်တော်မြတ်ကြီးဟာ သေခါနီးအချိန်မှာကိုပဲ သူ့မယားဘေဘီလေး အိုင်အေရှာအပေါ်မှာ တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့မှာမယားတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထဲက အိုင်အေရှာကို အချစ်ဆုံးဖြစ်ပုံရပါတယ်။ သေလုမြောပါးဝေဒနာခံစားနေရတာတောင်မှ သူ့မယားတွေနဲ့ ဆောင်တော်ကူးဖို့ပဲစိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တာပါလား။ “မနက်ဖြန်ဘယ်သူ့အလှည့်လဲ မနက်ဖြန်ဘယ်သူ့အလှည့်လဲ”နဲ့ အိနြေ္ဒမဆယ်နိုင်လောက်အောင်ကိုပဲ သူ့မယားတွေကို မေးနေတော့တာပဲ။ အမှန်တကယ်က အိုင်အေရှာလေးရဲ့အလှည့်ကို ရောက်ဖို့စောင့်နေတာလေ။ အဲဒါကိုအလိုက်သိတဲ့ ဇနီးမယားများကလည်း မိုဟာမက်ကြီး သေတဲ့အချိန်အထိကို အိုင်အေရှာအိမ်မှာနေစေဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ကြရပါတယ်။ ဒိလိုနဲ့ပဲ အိုင်အေရှာနဲ့ ညအိပ်ရတဲ့နေ့မှာပဲ မြတ်တမန်တော်ဟာ အလာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့်တော်ကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။ အသက်ထွက်တာ ဘယ်လိုထွက်သွားလဲသိလား?
သာမန်တွေ့နေကြမွတ်ဆလင်တွေလို ပါးစပ်က ကလေမာဂါထာလေးရွတ်ပြီး အသက်ထွက်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုမြတ်သော သေခြင်းမျိုးနဲ့ အသက်ထွက်သွားတာလို့ ထင်လား? ထင်ရင်တက်တက်စင်အောင် လွဲသွားပါပြီ။ မိုဟာမက်က အိုင်အေရှာနဲ့ kissingဆွဲနေရင်းနဲ့ပဲ အသက်ထွက်သွားတာပါ။ အသက်ထွက်သွားတုန်းက မိုဟာမက်ရဲ့ခေါင်းကအိုင်အေရှာရဲ့ ရင်သားနဲ့လည်ပင်းကြားထဲမှာရှိနေပြီး သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ တံတွေးတွေကရောထွေးနေပါတယ်တဲ့။ ကဲ မယုံမရှိဖြစ်မှာစိုးလို့ မူရင်းကျမ်းကိုးလေး ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ဘုရားဖက်ပြီးသေတာလား မယားဖက်ပြီးသေတာလားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပေါ့ မွတ်စလင်တို့ရေ။ မင်းတို့တမန်တော်ကြီးက သူတော်ကောင်းကြီးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်ပြီနော်။
အဲဒီလို အသက်၆၃နှစ်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲမှာ အသက်ထွက်သွားတာကို အဲဒီတုန်းက အသက်၁၈နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ အိုင်အေရှာက သူကငယ်လွန်းလို့ ဗဟုသုတနည်းလွန်းလို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ထားပါသေးတယ်။(Ibn Hisham page 682)